सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको तयारी गरिँदै, आजबाट देशभरका सबै सरकारी कार्यालय खुल्ने – Khabar Silo
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको तयारी गरिँदै, आजबाट देशभरका सबै सरकारी कार्यालय खुल्ने
Posted on June 15, 2020 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौं । करिब ३ महिनादेखि लागू भएको लकडाउनबाट आजबाट लुजडाउन गरिने भएको छ ।कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुनु अगावै नेपालमा अपनाइएको सावधानी लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लाने योजना अनुसार आजबाट सबै सरकारी कार्यालय खुला गर्ने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सुरुमा कार्यालयहरु केहीदिनसम्म २ बजेसम्म खोलिनेछ । त्यसपछि दुई सिफ्ट गरी ८ देखि २ र २ देखि ६ बजेसम्म खोल्ने तयारी छ ।
लामो समयदेखि ठप्प रहेको सार्वजनिक यातायात पनि खोल्ने तयारी सरकारको छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका भित्र आउन र बाहिर जानका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुचना जारी गरेर कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै ट्याक्सी भने यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । निजी सवारी सञ्चालनको अनुमति पनि यस अघि नै दिइएको भएता पनि शैक्षिक संस्था भने भदौमा मात्र खोल्ने तयारी भएको छ ।
भाइरल झांक्रीले दुई बर्ष नबोलेको बालकलाई एकैरातमा बोल्ने बनाए ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )
भाइरल झांक्रि बेला बखतमा चर्चाको बिषय बनिनै रहन्छन् कहिले खाल्डो खनेर ला`श झिकेर त कहिले ढलेको मान्छेलाई समेत उठाएको भन्दै उनी चर्चामा आइन‌रहन्छन् । यसै बिचमा फेरि उनको चर्चाले निकै बजारमा ठाउँ ओगटेको छ । सरु तिमल्सिनाका छोरा जो बिगत साढे दुई बर्षदेखि नत हास्थे नै नत बोल्थे नै तर भाइरल झाक्रिले हिजो राति झारफुक […]
काठमाडौँमा प्रदुषण : जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने !
Posted on March 29, 2021 Author khabar silo
आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अकस्मात् एउटा सूचना जारी गर्‍यो । कोरोना भाइरससम्बन्धी सूचनामा मन्त्रालयले केही सन्देश, आग्रह र केही निर्देशन दिएको छ । देशभर भिडभाड हुने कुनै पनि किसिमको सभा सम्मेलन नगर्न आग्रह गरिएको छ ।अहिले भारतमा कोरोना भाइरस स’ङ्क्रमि’त बढिरहेका छन् । नेपालमा समेत सङ्क्रमण बढ्न सक्ने भन्दै देशभर सभा, जु’लुस, र्‍या’ली, भेला, जमघट, गोष्ठी, […]
मौसमविद्ले दिए यस्तो चेतावनी, कहाँ छ कहाँ छ वर्षाको सम्भावना ?
Posted on September 15, 2021 Author khabar silo
काठमाडौ । अझ केही दिन वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद्ले जनाएका छन् । कतै मध्यम त कतै ठूलो वर्षा हुने जनाएका छन् । हाल नेपालमा भारतको छत्तिसगढ र मध्य प्रदेश आसपासमा अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेका कारण सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। साथै मनसुन न्यून चापीय रेखा औसतभन्दा दक्षिण तर्फ रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान […]
सार्वजनिक सवारीसाधन सुचारु गर्न थप छलफल सुरु